Moscow State Institute Wezangaphandle - Funda ngaphandle
Moscow State Institute Wezangaphandle
Moscow State Institute of International Relations Yokuxhumana
Izwe : Inhlangano yase Russia
isifinyezo : MGIMO
Wasekelwa : 1944
Ungakhohlwa xoxa Moscow State Institute of International Relations
Bhalisa at Moscow State Institute of International Relations
MGIMO kuyinto ehlonishwayo isikhungo waseRussia kakhulu zokufundisa abantu abasha nezithakazelo international. Ukuze abafundi international, MGIMO wukuthi nokuningi: yesimanje, basamukela, futhi ngokuhlakanipha avuselelayo indawo ukutadisha edolobheni elikhulu kunawo wonke eRussia sika.
student umzimba MGIMO ezihlukahlukene of 6,000 kukhiwa ezinhlwini phezulu abafundi Russian futhi avela emayunivesithi umlingani emhlabeni wonke. MGIMO inikeza ezibanzi izifundo emazingeni undergraduate yezifundiswa - ezindabeni zamazwe ngamazwe, wezifundo zezombusazwe, ezomnotho, futhi umthetho wamazwe ngamazwe, ukuze journalism, ukuphathwa kwebhizinisi, kanye nenqubomgomo energy. undergraduates International ongafaka isicelo B.A ngokugcwele English-wafundisa. Uhlelo noma khetha izifundo eyinselele nethakazelisayo in Russian. Students befuna ngokwezinga elithile Master ongafaka isicelo omunye izinhlelo MGIMO sika groundbreaking double-degree, banikela ngokubambisana nezikhungo zamazwe omhlaba, noma bafune indawo eyodwa izinhlelo ezingaphezu kuka amathathu MA wafundisa in Russian.
Ngoba wonke umlando walo, MGIMO uyaqhubeka ukwenza ngokwayo. In the last emihlanu edlule, inyuvesi ubumbe amaxhama okusebenzisana eziningi ezintsha nezikhungo ehola emhlabeni jikelele. MGIMO is lahlanganisa ngokugcwele Bologna Evumelana, nokuveza obala izindinganiso eziqinile izikhungo zemfundo ephakeme European. Inyuvesi unesibopho kokudala umzimba olokhu elokhu ivela umfundi, ikharikhulamu, futhi campus ukuphila oqhubeka ukubonakalisa idumela layo njengoba ndawo waseRussia ehlonishwa kakhulu futhi eziphambili kakhulu sokuqonda ezindabeni zamazwe ngamazwe.
ERUSSIA'S UNDUNANKULU UNIVERSITY
MGIMO kuyinto isikhungo owaziwa kakhulu Abantu yodumo waseRussia. Kuyinto okusezingeni eliphezulu ngazo zonke izindlela igama elithi – umsebenzi oncomekayo odumile, ozimele, coeducational, endowed esidlangalaleni. nezikole eziyisikhombisa MGIMO kanye nezikhungo ezine zemfundo ahlanganise iminyango eminingi academic, ukwehlukana, futhi umklomelo izinhlelo, kanye nezikhungo imikhakha eyahlukene kanye nezinhlelo imisebenzi yesayensi nokwelula ngalé kwemingcele yendabuko zomnyango.
eyunivesithi global kakhulu waseRussia, MGIMO bekulokhu ekhaya Russian abafundi abavela emhlabeni wonke iminyaka ecishe ibe 60 iminyaka, ukuhlinzeka kuka 5,000 international iziqu imfundo ukuze kuchume njengoba abaholi emkhakheni ezimele kanye nekahulumeni emhlabeni jikelele. Ngaphezu kwalokho, MGIMO has ubuhlobo obuseduze izikhungo omhlaba anothile ezemfundo, yonkana Europe, I-Asia, aseMelika, futhi Africa. MGIMO izishaya isifuba on a focus global futhi MGIMO uyikhaya for abafundi global.
MGIMO University wayengomunye wabathathu amayunivesithi okuqala Russian ukujoyina European Amayunivesithi Association, futhi isayina isivumelwano Bologna Evumelana. Ifilosofi MGIMO inikeza yokufundiswa for Bachelor and Master degree izinhlelo baziwa emhlabeni wonke, abafundi ukuzuza ticu okuyizinto izihluthulelo omsebenzi kanye academic amathuba nasemhlabeni wonke. MGIMO Honorary zobudokotela ziye waboniswa ovelele emhlabeni jikelele.
WONKE COURSE UKUKHETHA
MGIMO enyuvesi phakathi uhla yasakazwa kabanzi izinhlelo zemfundo kanye specialisation etholakala university of uhlobo yayo kuphi. Uma kuziwa ekunikezeni abafundi umongo sokuqonda izwe owayephila ngesikhathi - kungaba ngokusebenzisa izingxoxo zamazwe onke, kuphatfwa kwahulumende, ibhizinisi, ezomnotho, umthetho, futhi journalism, ingasaphathwa-ke 53 izilimi lifundisa - MGIMO uhlukile.
EZIVELELE UKUFINYELELA academic
MGIMO University uletha ndawonye izici best of a liberal arts ekolishi nalezo iriseshi yaseyunivesithi enkulu. Le ndlela inikeza abafundi ukufinyelela close to ezingaphezu kuka 1200 oprofesa namalungu ubuhlakani, kufaka 20 Amalungu okugcwele kanye namalungu ezihambisana nayo odumile waseRussia Academy of Sciences, eminye 113 odokotela zesayensi 400 zobudokotela isayensi candidates. nezifundiswa MGIMO sika uyaziqhenya abafundi bayo.
WORLD UCWANINGO odumile
With an idumela ovelele futhi isimo academic MGIMO ngokungaguquki lifaka kakhulu izilinganiso university. ucwaningo Its izilokotho wonke ngokusebenzisa collaborations ehola Research Institutes Russia, amazwe CIS, futhi emhlabeni wonke.Ngaphansi isambulela we Ministry of Foreign Affairs, MGIMO kuyinto inqubomgomo Tikhulu ucabanga-tank kanye isithangami mpikiswano kanye nokuhlaziywa omhlaba kanye nezindaba zamanje, ngeminikelo alo ukuhlaziya global kakhulu kwafunwa.
Kusukela umbono yaqala MGIMO kanye nefilosofi uhlanganisé bendabuko okukhulu academic nge innovation ebhaliwe yengqondo. Uhlelo nyuvesi Innovative Sikhungo, ukusebenza eminyakeni 2007-2008, musha nokugxila kwawo imfundo kolwazi esekelwe. Isimiso wabona MGIMO ukuthuthukisa uhlelo olusha izinga sibonakalisa izitayela zesayensi kanye ezemfundo owayephila ngesikhathi, nemikhuba yokuphathwa ezintsha kanye nobuchwepheshe, kanye nokuheha abaholi ezemfundo international.
Inyuvesi lidume lomhlaba academic, okusho bhá yabaholi Russia asazozenza basafunda lapho manje, nge inani elandayo lozakwabo bakwamanye amazwe. Unyaka ngamunye best esikoleni esiphakeme abaphothule waseRussia ezidla abacela enkulungwaneni izindawo ezintsha, nabathile izinhlelo – ikakhulukazi ezomnotho, umthetho, futhi kwamaZwe – kokuba kuze kufinyelele 30 abafakizicelo indawo ngayinye.
MGIMO abaphothule zihlanganisa omongameli, ondunankulu, futhi izikhonzi angaphandle Azerbaijan, Armenia, Belarus, Bulgaria, Kazakhstan, Mongolia, Slovakia, Ukraine nakwamanye amazwe.
MGIMO inikeza hhayi kuphela imfundo ephakeme, kodwa ithuba engenakulinganiswa ukuze athole oxhumana professional okuzokwenza sikhuthazele ngendlela engaphezu imfundo yasesikoleni. uhlaka Its kanzima eziyinselele academic is kwahambisana by lenemphilo social lapho umphakathi umfundi kanye alumni etholakalako kakhulu futhi basamukela kubafundi angaphandle. Esimweni esinjalo abafundi wanamuhla bangaba abangane kusasa amazwe bezombusazwe, zomthetho, Abaholi ibhizinisi kanye nesakhiwonchanti setenhlalo.
Kakhulu ekuphileni NABANTU
Beyond isifundo, MGIMO Abafundi bazothola ngokwabo besondele amakhonsathi eziningi, bedansa, comedy nights, kanye nezenzakalo zonke ezemidlalo ongayicabanga. Izinhlangano ezihlukahlukene umfundi bagcwalise ikhalenda izenzakalo ezengeziwe social. Kunjalo, MGIMO kuyinto e Moscow, komunye wemizi emikhulu kakhulu emhlabeni, nge uxhaxha ingcebo zamasiko nezomlando, isiko ukhombise impilo futhi nightlife nemibukiso emihle. Iphinde inikeza ukufinyelela okulula ukuhlukahluka kanye energy of Russia owayephila ngesikhathi, kanye namagugu ayo amaqhawe zamasiko. MGIMO kumnandi ukuphila for abafundi international.
School of Science Political
School of International Business and Administration Business
International Institute of Energy Policy Nezingxoxo Zezombusazwe
MGIMO, okuyinto, in Russian, imele Moscow State Institute of International Relations, yasungulwa ngo-Okthoba 14, 1944 lapho USSR Council of People Commissars kabusha School muva wadala Wezangaphandle YaseMoscow State University zibe sikhungo esizimele. Ekuqaleni esibizwa Institute of International Relations (Imo) yayo yokuqala 200 Izitshudeni Veterans ababesinde kulesi Izehlakalo Second iMpi Yezwe futhi babezimisele ukwakha ukuthula kanye nekusimama.
Kusukela ekuqaleni MGIMO yayihloselwe ukuba abe academic ucwaningo kanye nemfundo isikhungo unique. It ngokushesha waba ekuholeni zamanxusa ukuqeqeshwa isikhungo waseRussia, nge MGIMO izifundiswa ufaka umnikelo enkulu kulo lonke emasimini wezangaPhandle, izifundo izwe nawesifunda, emthethweni wamazwe omhlaba kanye nobudlelwane yetemnotfo. Ukwengeza, kwathatha isikhundla iyahola oyithandayo zesayensi, lapho kusungulwa izikole zwe eziningana odumile zesayensi, futhi njengoba emsebenzini yososayensi abaningi ezivelele Russian, kuhlanganise Academy of Sciences amalungu E.Tarle, L.Ivanov, V.Trukhanovskiy, S.Tikhvinskiy, N.Inozemtsev, futhi Y.Frantsev.
Ekuqaleni MGIMO sakhiwe izikole ezintathu: School of International Relations, School of International Economic Relations and School of Law International. Abafundi International beza MGIMO kusuka 1946. Kusukela ngaleso sikhathi MGIMO alumni baye baba ibhizinisi kazwelonke, Abaholi zamanxusa kanye zomthetho emazweni amaningi, nabaningana ekubeni ongqongqoshe basemazweni angu, izinhloko kahulumeni, ngisho oMongameli.
Ngo 1954 Moscow Institute of Oriental Studies, omunye omdala umisa Russian eyamlandela kuya Lasarevsky School wadala in 1815, kwaba bafakwe MGIMO. umtapo Institute sika yaceba kakhulu kwalokho umtapo odumile Lasarevskaya, okuyinto babengenalo peer umzimba wayo omkhulu kwezincwadi Oriental.
Ngo 1958 MGIMO lithathwa Institute of Trade Foreign, okwase kuyisikhathi eziqhutshwa ngaphambilini ngaphansi Aegis of the Ministry eU.SSR Trade Foreign. Lokhu kwaholela ukunwetshwa School of International Economic Relations kanye nokugxila ekuqeqesheni abasebenzi namanye amazwe kanye Ochwepheshe nezomnotho. Ngo 1969 the International Journalism School yasungulwa.
In 1980 futhi 1990, ushintsho profound kwezenhlalo nezomnotho eshanela Russia wabona izinguquko ezinkulu isakhiwo kanye ezemfundo izinhlelo MGIMO sika. Ngo 1991 Sikolo entsha ye International Business and Business Administration yasungulwa.
Kusukela 1992 Institute iye iphethwe Rector, Professor Anatoly Torkunov, ogama ubuholi liye lasiza ekunqobeni nenhlokomo 1990. Ngaphansi sokubusa kwakhe MGIMO uye waqhamuka nohlelo olunzulu sesimanje zemfundo kanye nemibono emisha, kuhlanganise ukuhlanganiswa obuseduze imfundo ephakeme European, ngokusebenzisa ukungena inqubo Bologna, the ukwanda of othintana international, futhi ekuphakameni we Institute ephambili imfundo international nesayensi.
Ngo 1994 MGIMO yanikezwa i-status University. Ngawo lowo nyaka wabona dalo of International Institute of Administration, kulandela isinqumo nguHulumeni Russian on ekuphathweni zikahulumeni kanye nokuqeqeshwa ukuphathwa kamasipala. 1998 wabona ekusungulweni School of Science Political, Nguye owazibiza izizukulwane kwasekuqaleni uhlobo salo eRussia ukuba agxile ukuqeqeshwa abaphathi inkonzo yomphakathi.
Ngo 2000 -International Institute of Energy Policy Nezingxoxo Zezombusazwe yasungulwa, ngaphansi Aegis of MGIMO, on the isinyathelo ekuholeni Russian izinkampani energy. Inhloso ka Institute ukuqeqesha abaphathi ukugqugquzelwa international energy ukubambisana.
MGIMO European Ihlangano Ihlangano yasungulwa ngo 2006, sibonakalisa imizamo ngokuhlanganyela Russian Federation kanye European Union ukuhlela ziqhubeka zokufundisa for isiphakamiso sokuba iziphathimandla zaseRussia kanye European.
2011 uye wazibona ekusungulweni esikoleni omncane kunabo bonke MGIMO sika, eSikoleni of Applied Economics and Commerce. It ihlukile noHlelo BA in Lemvelo and Wildlife Management, okuyinto eba ubuchwepheshe emkhakheni ezomnotho futhi imvelo.
Minyaka yonke MGIMO nobheka abafundi abangaphezu kwenkulungwane, nazo zonke izingxenye Russian Federation, nasemazweni omhlaba kusukela ngaphezu 60 amazwe. Over 35 abayizinkulungwane alumni Russian futhi global bayaziqhenya asebethweswe iziqu eMoscow State Institute of International Relations. Ukwehlukana egade kukhona ngaphambili MGIMO Alumni Association bakhuthele emazweni amaningi emhlabeni wonke. Ngo 2007, the MGIMO Alumni Association esungulwe kuqala isipho eyunivesithi Russia sika - Development Foundation for MGIMO.
Uyafuna xoxa Moscow State Institute of International Relations ? Noma yimuphi umbuzo, imibono noma ukubuyekezwa
Moscow State Institute of wezangaPhandle Map
Izithombe: Moscow State Institute Wezangaphandle Facebook ezisemthethweni
Moscow State Institute of International Relations Izibuyekezo
Joyina ukuze kuxoxwe laseMoscow State Institute of International Relations.
Izincwajana zemininingwane emayunivesithi Russian Federation
WaseHerzen State Pedagogical University of Russia Saint Petersburg
Ufa State Petroleum Technological University Ufa
abantu’ Ubungane University of Russia Moscow